मात्र १५ दि’नसम्म दहीमा मिसाएर खानुहो’स् यी चिज, ह्वात्तै घट्ने छ तौल - Babal Khabar
September 20, 2021 by बबाल खबर
आजको यस्तो दौडधुपको जीवनमा, सबैजना फिट हुन चाहन्छन, तर अफसोस कि यो समय पाउँदैन।
आजको समयमा, एक व्यक्ति पैसा कमाउनको लागि यति व्यस्त भएको छ कि उसले आफ्नो खाना र पेयबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन असमर्थ हुन्छ ।
यस लापरवाहीका कारण, शरीरमा कुन रोगको घर बसेको हुन्छ मानिसलाइृ पत्तै हुँदैन। जब यसले एक गम्भीर रूप लिन्छ यस्तो अवस्थामा पनि बे भइरहेको छ भन्ने कतिलाई थाहा नै हुँदैन ।
आज हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो समस्याको बारेमा बताउन जाँदैछौं कि आधाभन्दा बढी मानिसहरू चिन्तित छन्। हो, हामी मोटाई, वजन बढ्ने र मोटाईको बारेमा कुरा गर्दै छौ करीव ८० मानिसहरूलाई मोटापालाई लिएर चिन्ता भइरहेको छ, यो सत्य हो ।
तौल प्राप्त गरेपछि, यो धेरै गाह्रो हुन्छ र जब तौल बढ्छ, शरीरमा सबै प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्छन् । शरीरको वजन बढाउनु पनि एक गाह्रो प्रक्रिया हो जस्तो कि वजन कम गर्न।
आजकल,मानिसहरुले तौल कम गर्न जिम जाने गर्दछन्। तिनीहरू सबै प्रकारका पेय पदार्थहरू पनि खान्छन् जुन तिनीहरूको शरीरको लागी हानिकारक प्रमाणित हुन्छ ।
यो विधि बनाउनका लागि तपाईले जीरा पाउडर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जीरा पाउडर तयार गर्न, तपाईले पहिले जीरालाई लिनुहोस् त्यसपछि यसलाई मिक्सरमा हाल्नुहोस् यो राम्रोसँग पिस्नुहोस् ।
अब तपाईले एक कचौरा दही लिनुहोस् र यसमा एक चम्चा अघि पिसेको जीरा पाउडर दहीमा हाल्नुहोस् । दिमागमा राख्नुहोस् कि यी दुई सामग्री बाहेक केहि पनि नमिसाउनुहोस्। यो नुस्खा तौल घटाउन को लागी धेरै प्रभावकारी छ ।
प्रत्येक दिन तपाईंले यो नुस्खा कम्तिमा १ देखि १५ दिन सम्म खानुपर्नेछ, जसले तपाईंको शरीरको मोटोपनलाई निको पार्छ र यसले तपाईंको शरीरको अत्यधिक बोसो हटाउदछ र तौल घटाउँदछ ।
थप केहि अनमोल मनछुने भनाईहरू :
१. सफल मान्छे आफ्नो फैसला ले दुनियाँ बदल्दछ र असफल मान्छे दुनियाँको डरले आफ्नो फैसला बदल्दछ।
२. नजर खराब भयो भने चिकित्सकले ठिक गरिदिन्छ तर नजरिया खराब भयो भने यसको उपचार स्वयमको अतिरिक्त कसैले गर्न सक्दैन।
३. जिन्दगीमा यस्तो मान्छे माथी कहिल्यै अन्याय नगर्नु जोसित गुहार्न को लागि भगवान बाहेक अरु कोहि हुदैन।
४. खुशी हुनको लागि सबैभन्दा पहिलो काम यो गर्नुस कि, मान्छेहरुले तपाइको बारेमा के सोच्नेछन, यो सोच्न बन्द गर्नुस।
५. आफ्नो हिसाब ले बाँच्नुस, मान्छेहरुको सोच त के हो त्यो त कण्डिसन अनुसार बदलिरहन्छ । यदि चियामा झिङ्गा खस्यो भने चिया फ्याकिदिन्छ तर यदि देशी घ्यु मा झिङ्गा खस्यो भने झिङ्गालाई फ्याकिदिन्छन। साभार गरियको खबर
Prevयाै”न सम्पर्क पछि गर्नै नहुने सात काम !
nextस्वास्थ्यका लागि दूध खानु राम्रो कि दही ? जानी राखौं